အမေရိကန်လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Idiom အသုံးအနှုန်းများ အပိုင်း - ၈
၀၂ ဇွန်၊ ၂၀၀၈
ဒီနေ့အတွက် ပထမဆုံးတင်ပြမယ့် အီဒီယမ်အသုံးကတော့ Walk Over ဖြစ်ပါတယ်။ Walk ကတော့ လမ်းလျှောက်တာ၊ Over ကတော့ တဖက်ကို ဆိုတော့ တဖက်ကို လမ်းလျှောက်လာတာလို့ လုံးကောက်အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ အီဒီယမ်အဓိပ္ပါယ်ကတော့ အလွယ်တကူ အောင်မြင်မှု ရရှိလိုက်တာ ပါ။ အီဒီယမ်ရဲ့ ဇစ်မြစ်က ဘယ်လိုဆိုတာကို ခန့်မှန်းမိကောင်း ခန့်မှန်းမိပါလိမ့်မယ်။ ခြေလျင်ပြိုင်ပွဲတခုမှာ ၀င်ပြိုင်သူဟာ အရှေ့ကို သိပ်ရောက်နေတဲ့အခါ တခြားပြိုင်ပွဲဝင်သူတွေက လိုက်မမှီတော့ပဲ အကွာကြီး ကွာနေလို့ရှိရင် သူက အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ လမ်းလျှောက်ပြီး ပန်းဝင်တဲ့သဘောကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါ တယ်။
အမေရိကန်ရဲ့ ၄၂ ဦးမြောက် သမ္မတဖြစ်သူ ဘေလ် ကလင်တန် (Bill Clinton) လက်ထက်က သူ့ရဲ့ဒုတိယမြောက်သမ္မတသက်တမ်းမှာ ရီပတ်ပလစ်ကန်ဘက်က ကိုယ်စားလှယ် ဘော့ ဒိုး (Bob Dole) ကို အနိုင်ရရှိ လိုက်တာ သောတရှင်များ မှတ်မိကြပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီတုန်းကလည်း အလွယ်တကူပဲ အနိုင်ရရှိလိုက်တာပါ။ ဒီအသုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ George Grow ပေးတဲ့ ဥပမာကို နားဆင်ကြည့်ကြရအောင်။
“Leading byatwo digit margin in the opinion polls. President Clinton easily wonawalk over in the November 5th 1996 election over republican candidate Bob Dole. So, he served in the White House for another four years.”
သမ္မတ ကလင်တန်ဟာ လူထုစစ်တမ်းကောက်ယူကြည့်ရာမှာ ဆယ်ဂဏန်းနဲ့ အသာရရှိနေတဲ့ အတိုင်းပဲ ၁၉၉၆ ခု နိုဝင်ဘာလ ၅ ရက် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ရီပတ်ပလစ်ကန်ဘက်က ကိုယ်စားလှယ် ဘော့ ဒိုး ကို အလွယ်တကူပဲ အနိုင်ရရှိလိုက်တယ်လေ။ ဒါကြောင့်လည်း သူဟာ အိမ်ဖြူတော်မှာ နောက်ထပ် ၄ နှစ်သက်တမ်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ ပြန်သွားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။
ဒီအသုံးရဲ့စာလုံးပေါင်းက Land မြေကြီး၊ Slide က လျှောကျတာဆိုတော့ ဒီနေရာမှာ Land Slide ဆိုပြီးသုံးတဲ့ ဝေါဟာရရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ မြေပြိုတာ ပေါ့ရှင်။ သာမန်အဓိပ္ပါယ်ဟာ မြေငလျင်လှုပ်လို့ ဖြစ်စေ၊ မိုးအဆမတန် သည်းလို့ဖြစ်စေ၊ တောင်တန်း ဒါမှမဟုတ် တောင်ကုန်းတခုခုပေါ်က မြေစိုင်မြေခဲ တွေ ကျောက်ဆောင်ကျောက်တုံးတွေ တ၀ုန်းဝုန်းနဲ့ ထိုးဆင်းကြလာတာကို သောတရှင်များ မြင်ဖူးကြမှာပါ။ အလားတူပါပဲ ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်း ယှဉ်ပြိုင်သူတဦးက မဲတွေ သူ့ဘက်ကိုပဲ အများကြီး အပြတ်အသတ် ရတယ်ဆိုရင် Land Slide နဲ့ အနိုင်ရရှိတယ်လို့ ပြောနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။
တနည်းဆိုရင်တော့ မဲတွေဟာ သူ့ဘက်ကို လျှောဆင်းလာတဲ့သဘော ပေါ့ရှင်။ သတင်းထောက်တဦးရဲ့ အသံလွှင့်တဲ့အခါ သုံးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ George Grow ပေးတဲ့ ဥပမာကို နားဆင်ကြည့်ကြရအောင်။
“What are the biggest election land slides in modern history? President Lyndon Johnson in 1964, Richard Nixon in 1972 and Ronald Regan in 1984 each beat its rival by more than 15 million votes.”
ခေတ်သစ်သမိုင်းက ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ မဲအပြတ်အသတ်နဲ့ အနိုင်ရခဲ့တာတွေဟာ ဘယ်သာဓကတွေပါလဲ။ သမ္မတ လီဒင် ဂျွန်ဆင် က ၁၉၆၄ ခုမှာ၊ နစ်ဆင်ကတော့ ၁၉၇၂ ခု၊ ရေဂင် ကတော့ ၁၉၈၄ တို့မှာ မဲအပြတ် အသတ် အနိုင်ရရှိလိုက်ကြတာပါ။ သူတို့တဦးချင်းက ပြိုင်ဘက်ကို မဲ ၁၅ သန်းကျော်နဲ့ အနိုင်ရခဲ့ကြတယ်လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။
စာလုံးပေါင်းက Clean ပြောင်နေတာ၊ ရှင်းနေတာ၊ Sweep က လှည်းကျင်းလိုက်တာလို့ လုံးကောက်အဓိပ္ပါယ်ရတော့ စကားပိုဒ်တခုလုံးရဲ့ တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်ကတော့ ပြောင်နေအောင် လှည်းကျဉ်းလိုက်တာပေါ့ရှင်။ အီဒီယမ်အသုံးကလည်း အလားတူပါပဲ။ အပြေးပြိုင်ပွဲတွေမှာ ပြိုင်တဲ့ အပြေးသမားတွေ အားလုံးဟာ ပွဲစဉ်အားလုံးမှာ ဆုတွေ သိမ်းကျုံးရရှိလိုက်လို့ ရှိရင် တနည်းအားဖြင့် ဆုတွေအားလုံး တက်တက်ဆင် ပြောင်အောင်ပဲ သူတို့ဘက်ကပဲ အနိုင်ရရှိလိုက်တယ်ဆိုရင် Clean Sweep ဆိုတဲ့ အီဒီယမ်အသုံးကို ရည်ညွှန်းသုံးနိုင်ပါတယ်။
တံမြက်စည်းနဲ့ ပြောင်နေအောင် လှည်းလိုက်သလို ပြိုင်ပွဲအားလုံးမှာ ဆုတွေကို သူတို့ဘက်ကပဲ သိမ်းကျုံးပြီး အပြတ်ရှင်း ပွေ့ပိုက်ပြီး ပြန်နိုင်တဲ့ သဘောပေါ့ရှင်။ အလားတူပါပဲ နိုင်ငံရေးမှာလည်း ပါတီတခုက ကိုယ်စားလှယ် တွေအားလုံး ဒါမှမဟုတ် ရာထူးနေရာအားလုံးမှာ အနိုင်ရရှိလိုက်တယ်ဆိုရင် Clean Sweep ဆိုပြီးတော့ တင်စားသုံးလို့ရပါတယ်။ အခုလက်ရှိ ဒီမိုကရက်ဘက်က သမ္မတကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဟီလာရီ ကလင်တန်နဲ့ ဘားရက်ခ် အိုဘားမား တို့နှစ်ဦး ဖေဖော်ဝါရီလက ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပမာအကြောင်း Gorge Grow ပေးတာကို နားဆင်ကြည့်ကြရအောင်။
“In early February, the Illinois Senator Barrak Obama hopping to the first black president wonaclean sweep over rival Hillary Clinton in three democratic presidential nominating contents in Washington States, Nebraska and Louisiana.”
ဖေဖော်ဝါရီလ စောစောပိုင်းက ၀ါရှင်တန်ပြည်နယ်မှာနဲ့ နီဘရာစကား နဲ့ လူဝီစီယားးနားတို့မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ဒီမိုကရက် သမ္မတကိုယ်စားလောင်း ရွေးကောက်ပွဲမှာ အီလီနွိုက်စ် က အထက်လွှတ် တော်အမတ် ဘားရက်ခ် အိုဘားမား ဟာ နိုင်ငံ့ရဲ့ ပထမဆုံး လူမည်းသမ္မတဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ ၀င်ပြိုင်ရာမှာ ပြိုင်ဘက် ဟီလာရီ ကလင်တန်ကို အပြတ်အသတ် အနိုင်ရရှိလိုက်တယ်လေလို့ အဓိပ္ပါယ် ရပါတယ်။ သောတရှင်များကို ဒီသီတင်းပတ်အတွက် တင်ပြခဲ့တဲ့ အီဒီယမ်အသုံးတွေကတော့ - Walk Over, Land Slide နဲ့ Clean Sweep တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ နောက်သီတင်းပတ် ခုလိုအချိန်မျိုးမှာလည်း ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်လို့ နောက်ထပ် အီဒီယမ်အသုံးတွေကို တင်ပြပေးဦးမှာမို့ စောင့်မျှော်နားဆင် ကြပါရှင်။